PHABRIX သည် New York 2110 ရှိ NAB Show တွင် SMPTE ST4IP အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှု၊ HDR အသစ်၊ 2018K / UHD နှင့် SDI Stress tools များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » PHABRIX NAB Show ကိုနယူးယောက် 2110 မှာ SMPTE ST4IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, အသစ်သော HDR, 2018K / UHD နှင့် SDI စိတ်ဖိစီးမှု toolsets မီးမောင်းထိုးပြ
PHABRIX NAB Show ကိုနယူးယောက် 2110 မှာ SMPTE ST4IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, အသစ်သော HDR, 2018K / UHD နှင့် SDI စိတ်ဖိစီးမှု toolsets မီးမောင်းထိုးပြ
PHABRIX, စမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်းဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, နောက်ဆုံးပေါ် HDR မှာ 2110K / UHD အဆင်သင့်ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ၎င်း၏ ST4IP ကိုစွမ်းရည်အတူတကွသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန် အောက်တိုဘာလ 2018-17, 18 ကနေနယူးယောက် 2018 ။ PHABRIX Booth N751 အပေါ်ခွင့်ဖြန့်ဖြူး AVBB join ပါလိမ့်မယ်။
အဘို့အ Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI မျိုးဆက်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး SMPTE 2110 / 2022-6 Workflows အခုဆိုရင်နှင့်အတူ SMPTE PTP နှင့် ST 2110-10 ထောက်ခံမှု, PHABRIX ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Qx rasterizer စီးရီးများနှင့်ခရီးဆောင် Sx TAG နှင့်အတူ 20 (-30, -40, -2022 နှင့် -6) မျိုးဆက်သစ်ဟိုက်ဘရစ်အိုင်ပီ / SDI ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ခုဖြစ်သွားတာသတိထားဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။ အဆိုပါ Qx စီးရီးယခုအသစ်အစီးနှင့်ကွန်ယက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools တွေကိုထိုကဲ့သို့သော packet ကိုပိတ်ဆို့မှုကိုအဖြစ်ကိစ္စများ၏လျင်မြန်သောရောဂါများအတွက်ဗီဒီယိုကွန်ရက်များစမ်းသပ်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်အဆင့်မြင့် toolset ကမ်းလှမ်းခြင်း, အစုံလိုက်သုံး packet Interval သည် Timing (သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်အစုံလိုက်သုံး packet ကိုယ်ရေးဖိုင် Generator ကို (PPG) တို့ပါဝင်သည်ပေးထားပါတယ်။
အဆင့်မြင့် SDI interface ကိုစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်ခြင်း အဆိုပါ Qx စီးရီး '' သစ်ကို SDI-ဖိစီး option ကိုတစ်ကမ္ဘာ့အတန်းအစားဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်အတူတကွင်း၏အစာရှောင်ခြင်း, အလိုအလျောက် 12G-SDI physical layer သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူ RTE ™ (ရီးရဲလ်အချိန်မျက်လုံး) နည်းပညာအလုပ်သမားသော SDI interface ကိုစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်ခြင်းတစ်ခုအဆင့်မြင့် toolset ထောက်ပံ့ SMPTE 12G / 6G / 3G ၏လိုက်နာမှုစိစစ်အတည်ပြု /HD12G သယ်ဆောင်မှုဝန်ချိန်အထိအတူတစ်ခုတည်းကို dual နှင့် quad link ကို configurations အတွက် -SDI interfaces ။ အဆိုပါ toolset SDI မတည်မငြိမ်ဖြမ်သွင်း (10UI မှ 10MHz, 0.01UI မှ 16Hz), မျက်စိလွှဲခွင်ညှိနှိုင်းမှု (+/- 10%), Pre-အလေးပေး, signal ကိုထိန်နဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတိုင်းရောဂါဗေဒပြသမှုနှင့်အတူဖြစ်စေဗီဒီယိုပုံစံမီးစက်နှင့်အတူ operating စကားအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည် သစ်တစ်ခု Bert Analyzer tool ကိုမှ coupled သစ်ကို PRBS Signal Generator ကို (PRBS7, 9, 15, 23, 31) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အသစ်တစ်ခုကိုရောဂါဗေဒ EQ / PLL ခွအေနအေ detector ကိုမှန်ကန်အချိန်ခလုတ်နှင့်အတူထွက် GPI ကျော်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
အပြည့်အဝပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် user interface ကို အဆိုပါ Qx ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဦးစားပေးအလုပ်လုပ်လေ့အကျင့်များအတွက် display ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု၎င်း၏ဆန်းသစ်, အပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ user interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမဆိုတည်နေရာကနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်စမ်းသပ်ခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတူရိယာဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများ, screenshots များနှင့်အသုံးပြုသူရလာဒ်ကဒိဖို့ကွန်ယက်ကို access ကိုအတူအဝေးမှတစ်ပြိုင်နက်အရွယ်မှာတူရိယာပြတင်းပေါက် 16 မှတက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ VNC နည်းပညာန်ထမ်း။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော HDR Toolset ယင်း၏ပြီးသားပြည့်စုံ PQ HDR toolset မှထည့်သွင်းခြင်း, အ Qx စီးရီးလည်းယခု 3K / UHD ၏ visualization နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုးမြှင့်, Hybrid ကို Log in ဝင်ရန်-Gamma (HLG) S-Log4 နှင့် Live SR ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်နှင့် HD အကြောင်းအရာ။
AV စနစ်နှောင့်နှေးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ & သုံးသပ်ခြင်း ဒါ့အပြင် NAB နယူးယောက်, PHABRIX ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့လက်ကိုင်တူရိယာမှာပြသရက်နေ့တွင်, Sx စီးရီးယခုမှအသံကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းများကိုအလိုအလျောက် AV စနစ်နှောင့်နှေး Analyzer နှင့်အတူတစ်ဦးသည် Programmable AV စနစ်စမ်းသပ် signal ကိုမီးစက်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကပေး Audio / Video နှောင့်နှေး option ကိုကမ်းလှမ်း တစ်အချက်ပြမှုကွင်းဆက်အတွင်းဗီဒီယိုကအချိန်ကိုက်။
"PHABRIX ရဲ့အနာဂတ်-proofed စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းဖြေရှင်းချက်အိုင်ပီ, UHD နှင့် HDR ကိုအကူးအပြောင်း၌ရှိသမျှသောအဆင့်တွင်အသုံးပြုသူများအထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်" ဟု Phillip ဒမ်, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ PHABRIX ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ဒီနေ့ရဲ့နည်းပညာကိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောလိုအပ်သော interfaces ကိုထောက်ပံ့သောထုတ်ကုန်များအပြည့်အဝ suite ကိုထောက်ပံ့ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်နေနှင့် AVBB ပေါ်သူတို့ကိုပြမျှော်လင့်မှာမတ်တပ်ရပ် NAB ပြရန် နယူးယောက်။"
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ip isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 New York ကပြရန် 2018 NAB NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow PHABRIX Qx စီးရီး SMPTE 2110 Sx စီးရီး 2018-10-10
ယခင်: Bexel 2018 ဘောလုံးရာသီအဘို့အတွင်-Air ကို Talent တဲနှင့်အတူအဆင့်မြှင့်ပြင်ပမှာ Audio / Video လှည်းကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Boxx တီဗီဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ဆယ်နှစ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့